24 Fikradda Fikradda Fikradda ee loogu talagalay Raga iyo Dumarka - Fikradaha Fikradaha Madadaalo
24 Fikradda Fikradda Fikradda ee loogu talagalay Ragga iyo Haweenka
Haddii ay dhacdo in aad ku jirtid qurxinta jidhkaaga, waxaa jira dhibco jirka ku jira oo ku siin doona naqshad quruxsan oo aad u baahan tahay. Markaad leedahay caloosha caloosha oo sidan oo kale ah, qof kastaa wuxuu u egyahay inuu kula eego markaad wax la mid ah sidan oo kale ah.
1. Fikradda adag iyo midabka midabka leh ee caloosha caloosha leh ee ragga
2. Tiger qabow dhinaca dhinac caloosha
Marmarka caloosha ee haweenka waa mid aad u yaab badan, waxaad arkaysaa qof soo socda oo leh xabbad tigeroo ah on #stomach oo waxaad la yaaban tahay sida hal abuurka qofka. Ma jeceshahay tattoo this?
3. Xayawaanka raaxada leh iyo midabada leh waxay wajahayaan fikirka naqshadeynta caloosha caloosha ee wiilasha
# Caloosha #Tattoo wax badan ka yara badan oo laga yaabo inaad ka shakisan tahay oo u baahan tahay dhawr shay oo kaliya oo si dhakhso ah looga heli karo qaybaha ugu badan. Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad hesho fannaaniin wanaagsan oo kaa caawin kara sawirka. Midda labaad waa qaabka aad u baahan tahay inaad hesho.
4. Farshaxan yaryar oo fikrado caloosha ah oo caloosha lagu dhejiyo fikradaha wiilasha
Tattoo caloosha qurxoon wuxuu u dhexeeyaa quruxda ugu quruxda badan oo dhan. Waxaa jira waqtiyo aan rabno inaan ka baxno aagaga raaxada waxaanan u adeegsanaa tattoos sidaan oo kale.
5. Fikradda tifaftirka caloosha iyo midabada leh ee loogu talagalay gabdhaha
Waxaad ku soo saari kartaa fikradahaaga warqad ka hor inta aanad ku siinin maqaarkaaga maqaarkaaga. Caloolgu waa mid ka mid ah qaybaha jidhka ee dhadhawyada u muuqda inay si fiican u qaboobaan gaar ahaan markaad leedahay fikrad hal abuur ah oo aad ku abuurto hal abuur.
6. Dilka wadnaha qaboojinta qaboojinta qaboojinta qabow ee caloosha
Malaayiinku waxay jecel yihiin tattooankan sababtoo ah sida ay u muuqato. Marar badan, waxaan aragnay dumar badan oo isticmaala tattoo gaar ah oo aad u qabow si aad u aragto.
7. Qaboojiyaha midabada leh ee jilbaha leh ee sawir-maskax ku samee caloosha
8. Qosolka casriga ah ee sawiradu ku habboon yahay naqshadda naqshadda caloosha
9. Naqshadeynta tattoo qaboojinta caloosha sare
Nooca noocan ah ee tattoo caloosha waa heer caalami ah mana aha qof kasta oo heli kara. Markaad isku dayeyso inaad kantaroolto agagaarkaaga, tattoo-ka # majiraan waa wax aadan awoodin inaad sameysid.
10. Fikradda sawir-boodhka buluuga ah ee fikrada naqshada ee caloosha
11. Fikradda xajinta caloosha ee caloosha ayaa lagu fekeraa ragga
Qofna ma arkin tattoo caloosha oo ma doonaynin inuu ku siiyo ku-celinta inaad istaagto wax aad u qurux badan oo ka baxsan. Waxaad sheegi kartaa in naqshadeynta tattookani ay tahay mid aad u fiican oo qurux badan.
12. Fikradda jilicsan ee jilicsan ayaa lagu fekeraa dhinaca caloosha
13. Walaashka careysan ee wajiga, fikrada naqshadaynta caloosha ee qaboojinta caloosha ee gabdhaha
Ka fikir suurtogalnimada inaad hesho tattoo caloosha sida gabadha oo qof walbaa wuxuu rabaa inaad had iyo jeer sheegto, sidee buu kuu dareemayaa? Tilmaamaha caloosha waxay ku yimaadaan naqshado kala duwan. Markaad rabto inaad gasho, waxaad ku bilowdaa naqshad tattoo ah oo kuu keeni doonta mid gaar ah.
14. Fikradda naqshadeynta caloosha ee caloosha caloosha ee ragga
15. Fikradda naqshadeynta caloosha ee calool xumida ee haweenka
Waqtiga xaadirka ah markaad raadineyso tattooska caloosha, waqti yar qaado baaritaanka haddii aad tahay gabadh iyo naqshad sameysid caloosha oo leh midab leh oo leh macno badan oo ku xiran.
16. Saltoosyada dhinaca dhinaca caloosha caloosha ee gabdhaha
17. Balanbaal qurux badan iyo tinqeer malaa'ig ah oo foosha ku habboon caloosha
18. Naqshadeynta laftirka wadnaha ee dhinaca caloosha
Haddii aad tahay gabadh u raadisa wax sahlan oo qabow, waxaa ugu wanaagsan in aad u tagto tattoo caloosha oo aan isha ku haynin isha. Sawirada midabada leh waxay noqotaa muxaadarooyin xiiso leh in ay isticmaalaan caloosha.
19. Fikirka tattoo ee caloosha iyo caloosha leh ee haweenka
Tattoo caloosha oo weyn ayaa noqotey wax aanad rabin inaad iska ilaaliso haddii aad ka fekereyso in aad isku dhejiso naqshadeynta.
20. Fikradda tattoo caloosha si loo daboolo calaamadaha fidsanaanta
21. Fikradda calool-galinta caloosha ee galmada ee gabdhaha
22. Naqshadeeynta ubaxa dhirta dhinaca caloosha
23. Fikrada naqshadeynta caloosha ee caloosha
24. Geedka iyo ubaxyada caloosha ee caloosha tattoo farshaxanka loogu talagalay gabdhaha
shimbir shimbirlaabto laabtatattoos moonmuusikada muusikadatattoos sleeveTattoo infinityarrow Tattootattoo ah octopustattoos taajkiisawirrada raggajimicsiga bisadahatattoo tilmaancalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahku dhaji tattoossawir gacmeedtaraagada kubbaddaDhaqdhaqaaqatattoos saaxiib saxa ahJoomatari Tattooswaxaa la dhajiyay tattoostattoos qorraxdashaatiinka shiidantattoos qosol lehtattoo biyo ahTartoo ubax badantattoo maroodigagaraacista gacmahalibto libaaxtattoo dheemantattoos gacantaTilmaamta jaalaha ahTattoo Feathergadaal u laabotattoos iskutallaabtatattoos eagletattoos qabaa'ilkatattoo indhahatattoossawirada malaa'igtaTattoos Wadnahatattoos qoortafikradaha tattootattoos cagtalammaanahasawirada gabdhahawaxay jecel yihiin tattoosnaqshadeynta mehnditattoos ubaxkoi kalluunkahenna tattoo